साउदी सुल्तानकी श्रीमती र छोरीको प्यास मेटाएर काठमाडौमा साढे तीन तले घर ! – Ramailo Sandesh
उनको रवाफ देखेर टोल छिमेकका मान्छे चकित छन्– उनी अर्थात कलियुगका कृष्ण ३७ बर्षका राजकुमार केसी । पढन नसकेर विदेश भासिएका उनले काठमाडौको थानकोटमा साढे तीन तले घर बनाएका छन । न उनको सरकारी जागिर छ, न कुनै पेसा व्यबसाय, तरपनि केसीको जीवन शैली देखेर उनलाई चिन्नेहरु चकित छन । तीन बर्ष कुवेतमा घरासयी कामदार काम गरेर फर्कीएका केसीको प्रगति देखेर गाँउका अन्यपनि आश्चर्यमा परेका छन ।
उनको पुर्ख्यौली घर भने धादिङ हो । ‘यस्ले कसरी घर बनायो भनेर हामीपनि चकित छौ, उनलाइ नजिकवाट चिनेका साथीले भने– घरभीत्रै भाडा माझेर बस्नेले यत्रो प्रगति गरेको देखेर हामीपनि आश्चर्यमा परेका छौ ।’ उनलाई गाँउले भन्छन् ।भाग्यमानीको भूतै कमारो ! राजकुमारका लागि कुबेतको धनाड्य ‘सुल्तान’ को घरभित्र भाडा माज्ने, खाना पकाउने र सुल्तानका श्रीमतीका कपडा धुने काम पाएको थियो । यसैबाट भाग्य कोर्ने मौका मिल्यो ती युवकलाई ।
देशभित्र रोगजारी नपाएर हण्डर ठक्कर खादै विदेश पुगेको नेपाली ठिटोले सुल्तानका श्रीमतीलाइ मिठो मिठो पकाएर मात्र खुवाएनन् बरु शारीरिक भोक प्यास पनि मेटाउन सफल भयो । पैसा कमाउन तल्लिन मुस्लिम सुल्तानहरु आफ्ना श्रीमतीको ‘भोक–प्यास’ मेटाउने तर्फ चिन्तित हुदैनन ।
त्यही मौकालाइ नेपाली युवाले राम्रोसंग सदुपयोग गरे, यौन प्यासले विरक्तिएकी महिलाको तीर्खा मेटाएर आफ्नो र उनी दुवैको कल्याण गरे । घरमा कामगर्ने हट्टा कट्टा युवासँग सुल्तानकी श्रीमती मात्र होइन, छोरी पनि पल्किएकी रहिछ । आमासँग त्यसो गरेको देखेकी छोरीले घरेलु कामदारलाई धम्काएर आफ्र्नो स्वार्थ पूरा गर्न लगाइ । नेपाली केटोको काम आवरणमा भान्से भएपनि उ वास्तविक मालिक बन्दै गएको थियो । दिउसोमा श्रीमती र साझमा छोरीलाइ ‘सन्तुष्टि’ दिन थाल्यो ।
भाग्यमानी नेपालीले एउटै घरभित्र तीनवटा जागिर पायो, पैसा पनि कुम्लायो । तर, श्रीमतीको हाउभाउ विस्तारै थाहा पाउन थालेपछि सुल्तानले घरेलु कामदारलाइ यता फर्काइदियो । तरपनि आफ्नो अतृप्त प्यास मेटादिएकोमा सुल्तानकी श्रीमतीले नेपाली केटालाइ नेपाल फर्किनु पहिले केही महङ्गा गहना(जवाहारत समेत दिएकी थिइन । यसरी एकजना सामान्य घरेलु कामदारले नाटकीय ढंगले काठमाडौंमा घर बनाउन सफल भयो । नेपालीहरु पैसा कमाउन कति धुर्त छन भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको छ नै यससँगै कमाईको एउटा नयाँ सनसनीपुर्ण पाटो पनि खुलासा गरिदिएको छ।
नेपालमा पनि पेशा विस्तार ! काठमाडौंमा घर बनाइ सकेपछि पनि केसीले कुवेतमा सिकेको सीपको भरपूर सदुपयोग गरे । पल्सर मोटर साइकलमा चढेर काठमाडौं शहर डुल्ने उनको पेसा अहिले पनि त्यही हो । श्रीमान विदेशमा रहेका लाहुरेनी देखी आर्मी प्रहरीका श्रीमती सम्मलाइ उनले अहिले कल्याण गरिरहेका छन । उनी पल्सरमा दिन रात दुवै टाइमको जागिर गर्दछन् यतिखेर राजधानीमा ।
श्रीमानको ‘सुन्तुष्ट बनाउने’ धन्दा बारे उनकी श्रीमती भने बेखवर छिन । म्यानपावर कम्पनी हो जतिखेर पनि जानु पर्ने हुन सक्दछ भन्दै उनले श्रीमतीलाई विश्वस्त बनाएका छन् । उनको ड्युटी कहिले कहिं चौविसै घण्टा समेत चल्ने गरेको छ । मदिरामा उनको खर्च हुन्न, खानेकुरा ‘जागिर’ सँगै पाउने भएपछि उनको कमाई पनि मोटै छ अहिले। श्रीमती र बच्चाबच्ची खुसी राखेका छन् उनले । व्यक्तीगत गोपनियताको लागि उनको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।
कालो ढुसीको संक्रमण बाँके र काठमाडौंको संक्रमितमा देखिएको पुष्टि
काठमाडौँबाट मुग्लिन जाने गाडी कुरेर बसेका तामाङ र परियार पक्राउ